Nhau - CENTRIFUGAL POMP INOGONESA KUROVA MVURA MVURA
Kune mweya mune inopinda nepombi
(1) vamwe vashandisi havazadze mvura yakakwana pombi isati yatanga; dzimwe nguva mvura inoita kunge yakafashukira kubva pagomba remhepo, asi haina kutendeudza pombi shaft kumhepo yakaneta zvachose, ichisiya mweya mudiki uchiri mupombi yekupinza kana pombi Iyo
(2) ine pombi yemvura inosangana nechikamu chakatwasuka chemvura inoyerera kunongedzera kwekushandisa kweanopfuura 0.5% yenzvimbo yakadzika, kubatanidza pombi inopinza ndiyo yekupedzisira soro, kwete yakatwasuka zvachose. Ukatetepa, iyo inlet pombi inochengetedza mweya, ichideredza mapaipi emvura nemapombi mune iyo vacuum, inokanganisa mvura.
(3) kurongedza kwepombi kwave kuneta nekuda kwekushandisa kwenguva refu kana kurongedza kwakasununguka, zvichikonzera huwandu hwakawanda hwemvura kuburitswa kubva pakapakati pekurongedza uye shaft yemubato. Nekuda kweizvozvo, mweya wekunze unopinda mukati mepombi uchibva munzvimbo idzi, Uchikanganisa mvura.
(4) iyo yekupinda pombi nekuda kwenguva refu ingangoita iri pasi pemvura, pombi yemadziro makomba ngura, pombi yemvura inoshanda mushure mekudonha kwemvura, apo maburi aya akafumurwa kumvura, mweya kubva mugomba kupinda mupombi yemvura.
(5) iyo inopinda pombi gokora kutsemuka, pombi dzemvura uye pombi dzemvura dzakabatana nekapaka kadiki, dzinogona kuita mweya mupombi yemvura.